Sei Apple's Mail Yakavanzika Dziviriro (MPP) Inobata sei Email Kushambadzira? | Martech Zone
Nekuburitswa kwazvino kweiOS15, Apple yakapa vashandisi vayo email neMail Privacy Dziviriro (MPP), kudzikamisa kushandiswa kwemapikseli ekutevera kuyera maitiro seakavhurika mitengo, mashandisiro echishandiso, uye nguva yekugara. MPP zvakare inovanza vashandisi 'IP kero, zvichiita kuti kutsvaga kwenzvimbo kuwedzere generic. Nepo kuunzwa kweMPP kungangoita seshanduko uye kwakatonyanya kune vamwe, vamwe vakuru vebhokisi retsamba (MBPs), seGmail neYahoo, vanga vachishandisa masisitimu akafanana kwemakore.
Kuti unzwisise zviri nani MPP, zvakakosha kutora nhanho kumashure uye kutanga wanzwisisa kuti vatengesi 'yakavhurika chiyero chekuyera chiitiko chichachinja sei.
Image caching inoreva kuti mifananidzo iri muemail (kusanganisira tracking pixels) inotorwa kubva kune yekutanga server uye inochengetwa paMBP's server. NeGmail, caching inoitika kana email yavhurwa, zvichibvumira mutumiri kuti aone kana chiitiko ichi chikaitika.
Apo chirongwa cheApple chinosiyana kubva kune vamwe chiri apo mufananidzo caching inoitika.
Vese vanyoreri vanoshandisa Apple mail mutengi neMPP vachave nemifananidzo yavo yeemail inofanotorwa uye kuvharirwa kana email yaunzwa (zvinoreva kuti mapikseli ese ekutevera anotorwa nekukasira), zvichiita kuti email inyore se. akasvinudzwa kunyangwe mugamuchiri asina kuvhura email yacho. Yahoo inoshanda zvakafanana neApple. Muchidimbu, mapixels ave kutaura 100% email yakavhurwa mwero izvo zvisiri izvo.
Nei izvi zvine basa? Validity data inoratidza kuti Apple inotonga kushandiswa kwemutengi weemail panenge pa40%, saka izvi pasina mubvunzo zvichave nemhedzisiro pachiyero chekushambadzira email. Semuyenzaniso, tsika dzakasimwa dzekushambadzira senge nzvimbo-yakavakirwa zvinopihwa, lifecycle otomatiki uye kushandiswa kweakasiyana matekinoroji ezvishoma zvinopihwa senge countdown timers zvichanyanya kuoma, kana zvisiri pedyo zvisingaite kushandisa nemazvo nekuti mareti akavhurika haana kuvimbika.
MPP inosuruvarisa kusimudzira kune vane mutoro email vatengesi vanotoomerera kune etsika akanakisa maitiro ayo anotowedzera kunyoresa ruzivo. Tora pfungwa yekukwanisa kuyera kubatanidzwa uchishandisa yakavhurika chiyero kuti usarudze-pasi vasingawanzo shanda vanyoreri, uye zvimwechetezvo, proactively kubuda-vasingashande vanyoresa. Aya maitiro, kana akashandiswa nemazvo, akakosha madhiraivha ekubuditsa zvakanaka, asi ari kuramba achinetsa kuita.
Kuvhurwa kweGDPR makore mashoma apfuura kwakaratidza kuti nei indasitiri iri kugamuchira kushambadzira kwetsika.
GDPR akatora zvakawanda izvo zvaitoonekwa seakanakisa maitiro - kubvumirana kwakasimba, kujeka kukuru, uye sarudzo yakakura / zvido - uye akaita kuti zvive chinhu chinodiwa. Kunyangwe vamwe vatengesi veemail vaizviona semusoro kutevedzera, zvakazoguma nemhando yepamusoro data uye yakasimba brand / hukama hwevatengi. Nehurombo, havazi vese vatengesi vakatevera GDPR zvakanyanya sezvavanofanira kana kuwana maburi semvumo yekuviga pixel-yekuteedzera mumatanho akareba ekuvanzika. Mhinduro iyoyo ingangove chikonzero chikuru icho MPP uye maitiro akafanana ave kugamuchirwa nyatsoona vatengesi vanotevera maitiro ehutsika.
Apple's MPP chiziviso nderimwe danho rakananga kune kuvanzika kwevatengi, uye tariro yangu ndeyekuti inogona kumisazve kuvimba kwevatengi uye kusimbisa zvakare hukama hwemhando / nevatengi. Sezvineiwo, vatengesi veemail vakawanda vakatanga kuchinjika zvakanaka MPP isati yatanga, vachiziva kusakwana kweyero yakavhurika metrics, senge pre-kutora, caching otomatiki mufananidzo kugonesa / kuremara, kuyedza kusefa uye bot kusaina-ups.
Saka vatengesi vangafambira mberi sei muchiedza cheMPP, vangave vatotanga kujairana netsika dzekushambadzira, kana kuti matambudziko aya matsva?
Maererano ne DMA rondedzero yekutsvaga Marketer Email Tracker 2021, chikamu chimwe chete muzvina chevanotumira vanovimba nemitengo yakavhurika kuyera kuita, nekudzvanya kunoshandiswa zvakapetwa kaviri. Vatengesi vanofanirwa kushandura kutarisa kwavo kune yakazara uye yakazara maonero ekuita kwemushandirapamwe, kusanganisira mametrics akadai semitengo yekuisa mubhokisi rekutumira uye masaini emukurumbira wevatumiri. Iyi data, yakasanganiswa nemametrics akadzama mushanduko yefunnel yakadai sekudzvanya-kuburikidza nemitengo uye mitengo yekushandura, inobvumira vatengesi kuyera zvinobudirira mashandiro kunze kwekuvhurwa, uye zviyero zvakaringana uye zvine musoro. Nepo vatengesi vangangoda kushanda nesimba kuti vanzwisise zvinokurudzira vanyoreri vavo kuti vavabatanidze, MPP ichakurudzira vatengesi veemail kuti vave nechinangwa chekutora vanyoreri vatsva uye kuramba vakatarisa pamametrics anozofambisa bhizinesi ravo mberi.
Pamusoro pezvo, vatengesi veemail vanofanirwa kutarisa kune yavo yazvino dhatabhesi yevanyoreri uye voiongorora. Ko avo vavanoshamwaridzana navo vari-ku-ku-date, vanoshanda uye vanopa kukosha kune iyo yepasi? Nekusimbisa pakuwana vanyoreri vakawanda, vatengesi vanowanzoregeredza nguva inodiwa kuti vaone kuti vanobatika vagara vanavo mudhatabhesi ravo vanogona kuita uye vanobatsira. Yakashata data inoparadza mukurumbira wevatumiri, inotadzisa email kubatikana, uye inongoparadza zvakakosha zviwanikwa. Ndiko uko midziyo inoda Everest Everest ine simba rinoita kuti mazita akachena kuitira kuti vatengesi vagokwanisa kutarisa nguva yavo nemari vachikurukura uye vachibatana nevanokosha vanyoresa avo vane mikana yekushandura, pane kuiparadza pamakero eemail asina kukodzera. zvinoguma nemabhaunzi uye zvisingaendereki.
Kana data nemhando yekuonana ichinge yasimbiswa, tarisiro yevatengesi veemail inofanirwa kuchinjika kune yakanaka kuburitsa uye kuoneka mumabhokisi ekunyorera. Iyo nzira yekuinbox yakanyanya kuoma kupfuura kufunga kwevazhinji vatengesi veemail, asi Everest zvakare inotora fungidziro kunze kwekuburitsa email nekupa zvinogoneka kuona mumishandirapamwe. Everest mushandisi,
Kuburitsa kwedu kwawedzera, uye isu tiri pachinzvimbo chirinani chekubvisa zvisingadiwe inorekodha kare kare mukuita. Kuiswa kwedu kuinbox kwakasimba uye kuri kuramba kuchikwira…kuti tirambe takabudirira tiri kutora matanho ese uye kushandisa zvishandiso zvakanakisa muindasitiri kuita kudaro.
Courtney Cope, Mutungamiriri weData Operations pa MeritB2B
Nekuonekwa mumametric ekushambadzira eemail uye mukurumbira wevanotumira, pamwe nekuona nzvimbo dzine dambudziko uye nekupa matanho ekudzigadzirisa, aya marudzi ezvishandiso akakosha kune email vatengesi.
Tichifunga nezveMPP uye neyakagadziridzwa nzvimbo yekushambadzira maitiro akanakisa, email vatengesi vanofanirwa kufunga patsva metrics uye mazano kuti vabudirire. Iine maitiro matatu - kufunga zvakare metrics, kuongorora dhatabhesi mhando uye kuve nechokwadi chekununurwa uye kuoneka - email vatengesi vane mukana wakanakisa wekuchengetedza hukama hwakakosha nevatengi vavo zvisinei nekuvandudzwa kutsva kunobuda kubva kune makuru mabhokisi ekutumira.
Dhawunirodha iyo DMA's Email Tracker 2021 Chirevo
Tags: apurotsamba yeapurocourtney copeemail dhatabhesi mhandoemail kuburitswaEmail Marketingemail metricsemail kuvanzikakushambadzira kwetsikaeverestGDPRGmailiosios15Rinozvikudza ip keromail kuchengetedza zvakavanzikamailbox providermbpmeritb2bnharembozha emailmppyekutevera pixelkuvimbikavalidity everestYahoo